Kaspersky Antivirus ကို & လုံခြုံရေး APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Kaspersky Antivirus ကို & လုံခြုံရေး
Kaspersky Antivirus ကို & လုံခြုံရေး APK ကို
Kaspersky Lab မှနေဖြင့် Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အခမဲ့ antivirus ကိုနှင့်ဖုန်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်
Android အတွက် kaspersky Internet Security ပို. ပင်အားနည်းချက်သင်၏ကွန်ပျူတာအဖြစ်သင့်ရဲ့ privacy နဲ့အွန်လိုင်းအန္တရာယ်တွေဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထက်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ဖုန်းများနှင့် tablet ကိုကာကွယ်ရန်အခမဲ့-to-ဒေါင်းလုပ် antivirus ကိုဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်း features တွေ
တစ်ဦးနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများအတူ - ►ဗိုင်းရပ်စ်များ, malware, spyware နဲ့ Trojan များစကင်ဖတ်
►အလိုအလျောက်ဖုန်းများ & tablet များထံမှဗိုင်းရပ်စ် & အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖယ်ရှား
► * သင် download လုပ်ပါအပေါငျးတို့သ apps များ & ဖိုင်တွေစောငျ့ရှောကျဖို့ကိုကူညီပါ
►သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျက်စိ prying ကနေကာကွယ်ပါ
►အွန်လိုင်းစျေးဝယ် & ဘဏ်လုပ်ငန်းအနေဖြင့်လုံခြုံသငျသညျဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကိုကူညီပါ
Web ကို surfing စဉ်►အန္တရာယ်လင့်များ & က်ဘ်ဆိုက်များမှထွက် Filter
သင့်ရဲ့ပျောက် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို► Find
Android အတွက် kaspersky Internet Security ပါဝင်သည်:
★ Antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ antivirus ကိုဖြေရှင်းချက် Scan ဖတ်မိုဘိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းကိုသင်၏ဖုန်းများနှင့် tablet ထုတ်ကုန်များကာကွယ်ပေးရန်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြား malware များအဘို့ apps များ download လုပ်။ malware ကိုဖော်ထုတ်မယ်ပြီးနောက်ဖုန်းလုံခြုံရေး app ကို virus နဲ့လုပ်ကွက်အန္တရာယ်ရှိ app များလင့်များ & ဖိုင်များကိုဖယ်ရှား။ *
Android အတွက် kaspersky Internet Security သင်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးသွားသောဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုတွေ့ပါကူညီပေးသည်။ ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး tool ကိုသငျသညျ, အဝေးမှ device ကိုတခုတခုအပေါ်မှာနှိုးဆော်သံကိုဖွင့်သော့ခတ်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုနေရာချထား, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို (မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ) သုတ်နှင့်ခိုးမှုသို့မဟုတ်အရှုံး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လက်ရှိတွင်သင့်ရဲ့ device ကိုအသုံးပြုပြီးလူတဦး၏တစ်ဦး mugshot ယူခွင့်ပြု ။
★ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာခိုးယူဆန့်ကျင်သငျသညျခုခံကာကွယ်။ သငျသညျ, မျက်လုံး prying ကနေသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS စာသားများဖုံးကွယ်သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်သူတို့သည်သင်၏ device ကိုကောက်မယ်ဆိုရင်အခြားသူတွေမြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်အရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ **
★မလိုချင်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS ပိတ်ဆို့ခြင်း
ဖုန်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ကို Android Device များပေါ်တွင်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပိတ်ဆို့ရန်ကိရိယာတခုလည်းပါဝင်သည်။ သငျသညျလွတ်လပ်စွာ, အဝင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ကိုကျမ်းအဘို့အ filtering ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားအနက်ရောင်စာရင်းမလိုလားသောအဆက်အသွယ် add, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို SMS စာသားများကြော်ငြာတွေနဲ့ Non-ဂဏန်းနံပါတ်များကိုကနေ spam များကို detect နိုင်ပါတယ်။
★က Web surfing စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လင့်များ Blocking
phishing နဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာအခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လင့်များပိတ်ဆို့ခြင်းအသုံးပြုပုံက်ဘ် surfing နေစဉ် antivirus ကိုစနစ်ကအင်တာနက်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုကနေသင့်ရဲ့ device ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ *** အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအောင်နေချိန်တွင်လုံခြုံသင့်ရဲ့အားနည်းချက်ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များနှင့် privacy ကိုထားပါ။
★ Android Wear ထိန်းချုပ်မှု
အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုသင်, function ကို«ငါ့ဖုန်းကိုရှာပါ»ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြား malware များအနေနဲ့ antivirus ကိုစကင်ကို run, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး status ကိုအပ်ဒိတ်များရရှိရန် activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Android အတွက် Kaspersky Internet Security ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
✔ Kaspersky Lab မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: ဦးဆောင်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတဦးတည်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအကျိုးရှိစွာကို malware detection နဲ့ antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း။
✔ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များ: ကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပို 400 သန်းဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်အသုံးပြုသူများ။
✔ high-end ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာများ: အန်းဒရွိုက် 6.0 အပေါင်းတို့နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်း & tablet များထောက်ပံ့ real-time ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
✔ ကြော်ငြာမပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာထဲမှာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေသို့မဟုတ်အခြားကြော်ငြာများမပြကြဘူးကျနော်တို့အခြားကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကြော်ငြာ network များရန်သင့် user data ကိုမရောင်းပါဘူး။
✔ ဘက်ထရီစီးပွားရေးမှာ: ဒီဖြေရှင်းချက်ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်အဖြစ်သင့်ရဲ့ device လုပ်ဆောင်စေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိရောက်မှုပေါင်းစပ်။
ပရီမီယံနှင့်အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်။ အခမဲ့ပရီမီယံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ် 30 နေ့တရားခွင်ကိုရယူပါ။
ချက်ချင်းဗိုင်းရပ်စ်အဘို့သင့် apps များနှင့်စက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတစ်ခုနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူ * အလိုအလျောက် Real-time antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
သူတို့သည်သင်၏ဖုန်းကိုကောက်သည့်အခါအခြားသူများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီနိုင်သလဲဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ ** သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
Web ကို surfing စဉ် *** Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့် phishing လင့်များထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးရန်နှင့်လုံခြုံသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဒေတာကိုစောင့်ရှောက်
- အသစ်! အန်းဒရွိုက်7၏ပံ့ပိုးမှုယခုရရှိနိုင်
- Bugfix နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
Kaspersky Antivirus ကို & လုံခြုံရေး
38.08 ကို MB
Kaspersky Lab မှ
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး & ...
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး - ဗိုင်းရပ်စ် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2019 မှာ 11: 20 နံနက်
ငါတကယ်က၎င်း၏ service ကိုတန်ဖိုးထား app ကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဒါဟာင်
ဇွန်လ 23, 2017 မှာ 8: 27 ညနေ
Kingroot & ဘယ်လိုအသုံးပြုငါ့ကိုကူညီပါရန်ဘယ်သူ့ကိုမှ Installing ခုနှစ်တွင် nice Apps ကပမှာ Baht Hav ပြဿနာ ????
အောက်တိုဘာလ 27, 2015 မှာ 8: 37 ညနေ
ကိုယ်ဟာသူ့ရဲ့စုံလင်သော app ကိုပြောပါနှင့်၎င်း၏ယုတ် perfection.thank ဦးနိုင်ပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 25, 2015 မှာ 9: 48 နံနက်
စူပါ antivirus ကို။
စက်တင်ဘာလ 2, 2015 မှာ 11: 02 ညနေ
အလွန်ကောင်းတဲ့ software နှင့် site ကို
ဇူလိုင်လ 14, 2015 မှာ 7: 08 ညနေ
အလွန် Nice app ကိုကျေးဇူးတင်စကား
ဇွန်လ 20, 2015 မှာ 4: 43 ညနေ
pakaooo antivirus ကိုအဆိုးဆုံးကဒီ app ကို download လုပ်ပါဘူး
မတ်လ 22, 2015 မှာ 9: 18 နံနက်
ဖိလစ်ပိုင်ကနေ thankz ^ _ ^
အောက်တိုဘာလ 7, 2014 မှာ 1: 58 နံနက်
အလွန် Nice app ကို